အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – ၂၀၀၉ စက်တင်ဘာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – ၂၀၀၉ စက်တင်ဘာ
အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – ၂၀၀၉ စက်တင်ဘာ
Posted by kai on Oct 12, 2009 in Editor's Notes |5comments
ကိုယ်စောင့်နတ်ရဲ့ ပါဝါဂဏ္ဍန်းအတွက် စံနှုန်းရှင် – Editorial Sept 2009
“စည်း”ဟူသည် မြန်မာတို့အတွက် စိမ်းသည်မဟုတ်ပါ။ လူ့စည်း၊ဘီလူးစည်း၊စည်းကျိုး၊စည်းပေါက်၊စည်းချ၊စည်းတား စသဖြင့် နေ့စဉ်သုံးစကားများတွင် ရှိနေပါလေသည်။
ရာမယနဇတ်တော်ကြီး၏ ရွှေသမင်လိုက်ခန်းတွင် တွင် မယ်သီတာကို ဒဿဂီရိ မယူနိုင်စေရန် ရာမ၏ညီတော် လက္ခဏာမှ စည်းတားထားခဲ့ဘူးသည်။ အဆိုပါစည်းကို ဘီလူးဖြစ်သူ ဒဿဂီရိ မကျိုးဖေါက်နိုင်သဖြင့် မယ်သီတာစည်းပြင်ထွက်လာပါစေရန် ညို ့ယူဆွဲဆောင်ခဲ့ရဖူးသည်။
လူသားတို့တွင် စည်းကိုယ်စီရှိကြပါသည်။ စည်းမှာ တခုတည်းပင်မဟုတ်၊ အထပ်ထပ်ရှိနိုင်သည်။ စည်းကို မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်ထားသော ထိတွေကိုင်တွယ်စမ်းသပ်မရသော “ဒိုင်းအကာ”ကဲ့သို ့လည်း မြင်ကြည့်မှတ်ယူနို်င်သည်။ကိုယ်စောင့်နတ်ဟူသည်လည်း မိမိကိုယ်အတွက် မိမိ၏စည်းတားတခုဖြစ်သည်။ ခေတ်စားနေသော အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ထပ်တင်ပြောရမည်ဆိုသော် တဦးချင်းစီအတွက် ထင်ရှားမြင်သာသောစည်းကို ပရိုက်ဗိတ်စီ ခေါ် “ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး”ဟု ပြောနိုင်မည်ထင်သည်။ တဦးချင်းမှသည် မိသားစု၊ အုပ်စု၊ ပါတီ၊သမဂ္ဂ၊နိုင်ငံဖြစ်လာသော် အဆိုပါစည်းနယ်ပယ်သည်လည်း အဆင့်ဆင့် တာဝန်ယူနိုင်မှုတို ့နှင့်အတူ ကျယ်ချဲ့သွားနိုင်ပါသည်။ ဤသို ့အားဖြင့် တယောက်နှင့်တယောက် တဖက်နှင့်တဖက် စည်းမပေါက်ကြရန် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကြရင်း လူ့လောကကို တည်ဆောက်ကြသည်။ စည်းမစောင့် စည်းပေါက်ကြလျှင်ကား ခိုက်ရန်ပွဲ စစ်ပွဲများအထိဖြစ်လာနိုင်ကောင်းလေသည်။
အမေရိကန်တို ့၏ အခြေခံဥပဒေမူလအစ(Massachusetts Constitution of 1780)တွင် လူသားတိုင်း၏တန်းတူညီမျှမှုကို အောက်ပါအတိုင်း(
)ရေးထားခဲ့သည်ဖြစ်ရာ လူသားတို့၏ လွတ်လပ်သည့်ညီမျှခြင်းကို တည်ဆောက်နိုင်သည့် အုပ်မြစ်ချပေးထားသည်ဟုတွေ့ရပါ၏။ လူသားတိုင်းမွေးဖွားလာသည်နှင် ့တန်းတူညီသော စည်းဘောင် ထားနိုင်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုမှသည် မိမိနှင့် ရုပ်ပါတ်ဝန်းကျင်တို့၏ဆက်စပ်ထိယှက်မှုများမှ စည်းဘောင်၏ နယ်ပယ်ဝန်းကို အဆင့်ဆင့် ကျယ်ချဲ့ကားနိုင်သည်။ မိမိကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းနှင့် စည်းကို ကျယ်ကျယ်ချဲ့နိုင်သူသည် အာဏာပါဝါ ကြီးသူ မြင့်မြတ်သူဟု တင်စားကြည့်လျှင်ရနို်င်ကောင်းသည်။
အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်တခုဖြစ်သော strength of materialsတွင် သက်ရောက်အားအင် (strength)တို့ကို မျဉ်းဖြင့်ဆွဲသော မြှားအတိုအရှည်ပမာဏဖြင့် ထင်ရှားအောင်တိုင်းတာပြရင်း မမြင်ရသော “အား”ကို မြင်မှုရှိအောင် ပြုပါသည်။အဆောက်အဦးတို ့အပေါ်၊ ရုပ်ပစ္စည်းတို ့အပေါ်သက်ရောက်အားနှင် ့တန်ပြန်သက်ရောက်အား ထိုမှသည် အလေးချိန်၊ဝန်၊ ခံနိုင်အားတို ့ကို အဆိုပါမြင်သာသော မျဉ်းကြောင်း(မြှား)တို့ဖြင့် သချင်္ာဗေဒ၊ဥပဒေသများသုံးပြီး တွက်ချက်ပါသည်။ မြှားရှည်လျှင်အားကြီးပြီး မြှားတိုလျှင် အားသေးသည့်ပုံဖြင့်တင်စားကာ ကွက်လပ်ဖြစ်နေသည့် (သိလိုသည့်)သက်ရောက်မှု(အား)တို ့ကို တွက်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
လူသားတို့အတွက် စည်းဘောင်၏ပါဝါ၊ ဒိုင်းအကာ၏အကျယ်အဝန်းကို တိုင်းတာနိုင်မည့် “မြင်နိုင်သိသာနိုင်သော ထိုအရာ”ရှိနိုင်သလော ။
အမေရိကန်တု့ိ၏ စံနစ်သဏ္ဍန်အရ “ငွေကြေး”သည် တစုံတခုသော အတိုင်းအတာစံနှုန်းကို ပေးနိုင်၊ပြနိုင်စွမ်းသည်ထင်ပါ၏။
ဆိုလိုသည်မှာ အကြင်သူ၏ မမြင်ရသောစည်းဘောင်နယ်ပယ်(ဝါ)အာဏာပါဝါကို ကြည့်နိုင်မြင်နိုင်သိသာနိုင်ရန် အဆိုပါသူ၏ ထိန်းကြောင်းကိုင်တွယ်နိုင်သော ငွေကြေးပမာဏနှင့် ချိန်ဆ၍ရနိုင်ကောင်းသည်ဆိုချင်သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ဖယ်ဒရယ်အစိုးရမှ လူတဦးချင်းစီ၏ အနိမ့်ဆုံးလုပ်အားခကို တနာရီ $7.25တပြေးညီသတ်မှတ်ပေးထားပေရာ အဆိုပါအချက်သည် များစွာကောင်းမွန်ပြီး လူတို ့၏ အခြေခံတန်ဖိုးတခုကို(ပြည်စံကုံလုံခြင်းမရှိစေကာမူ) ပြနိုင်သော စံတခုအဖြစ်ကြည့်မြင်နိုင်ပါသည်၊ လုပ်အားနှင့်ငွေ အချိုးချပေးထားနိုင်မှုလည်းဖြစ်နေပါသည်။ အထက်ဖေါ်ပြပါ အခြေခံဥပဒေကိုလည်း ရောင်ပြန်ဟပ်နေသည်ဟု ထင်မိသည်။ သို ့ကြောင့်သာလျှင် “တနှစ် သင်ဘယ်လောက် ထုတ်လုပ်ရှာဖွေနိုင်သလဲ”ဟူသော မေးခွန်း တွင်တွင်မေးလာနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ တနှစ် ဒေါ်လာ၂သောင်းရှာနိုင်သူနှင့်ဒေါ်လာ၂သန်းရှာနိုင်သူတို ့၏ အာဏာပါဝါ၊ ဒိုင်းကာ၊စည်းဘောင်ကျယ်မှုတို ့ကို များစွာမြင်နိုင်ထင်ရှားနိုင်သည်လည်းဖြစ်ပါ၏။
နောက်တနည်းအားဖြင့် သူတည်းတယောက်သည် ငွေကြေးအားဖြင့် ကိုယ်တိုင်၊ ကိုယ်ပိုင်အတွက်မရှာပြသော်ငြား သူ၏နောက်ဖက်မှ ထိုသူ့အတွက် ငွေကြေးပမာဏအားဖြင့် (သို ့မဟုတ်)လုပ်အားအားဖြင့် ပံ့ပိုးအကူဖြည့်ပေးမည့်သူ မည်မျှသောအရေအတွက်ရှိသနည်းနှင့် သွယ်ဝိုက်၍လည်း သိသာအောင်တွက်ချက်ယူနိုင်ပါသည်။
ဤသို ့ဖြင့် လူ၏ဩဇာ၊ပါဝါကို ချိန်ဆမြင်ကြည့်နိုင်ပါမည်။
ပြီးခဲ့သော စက်တင်ဘာလ (၉)ရက်နေ့က နိုင်ငံတော်၏လူထုကျမ်းမာရေးအစီအစဉ်သစ်များအတွက် သမ္မတအိုဘားမား ကွန်ဂရက်တွင်မိန်ခွန်းပြောကြားစည်းရုံးနေစဉ် ကွန်ဂရက်အတွင်းရှိ ပရိသတ်ထံမှ ထင်ရှားသော အသံတခုထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ “You lie” ဟုအော်ဟစ်ပြောရင်း စည်းကျော်မိခဲ့သူမှာ ရီပါဗလစ်ကင်န်အမတ်(Joe Wilson)ဆိုသူ ဖြစ်သည်။ နောက်တရက်တွင် အိမ်ဖြူတော်သို့ တိုက်ရိုက်တောင်းပန်ခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းဆက်စပ်အဖြစ်အချို ့ချရေးပြလိုသည်။
စည်းကျိုးပေါက်ပြီးတနာရီအတွင်းမှပင် အမတ်(Joe Wilson)၏ လွှတ်တော်နယ်မြေဖြစ်သော (South Carolina)တွင် သူ့အား(၂၀၁၀)တွင်အတိုက်အခံပြုရမည့်သူဖြစ်သော ဒီမိုကရက်ပါတီမှ (Rob Miller)အတွက် မဲဆွယ်ရာတွင်အသုံပြုနိုင်မည့်ငွေ ဒေါ်လာ ၁သိန်းနီးပါးမျှ လက်ခံရရှိလိုက်သည်။ (၁၁)ရက်နေ့တွင် တဦးချင်းအလှူရှင်အယောက်၂သောင်းထံမှ ဒေါ်လာရသိန်း၅သောင်း လက်ခံရရှိသည်။ တပါတ်အကြာတွင် စုစုပေါင်းဒေါ်လာ ၁သန်းကျော်မြှင့်တင်ရရှိသွားပြီဟု သတင်းများကဆိုသည်။ အဆိုပါငွေသားများသည် ၂၀၀၈က ၄၆-၅၄ရာနှုန်းနှင့်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရသူ(Rob Miller)အတွက် ၂၀၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိရန်များစွာထောက်ကူနိုင်သောပမာဏဖြစ်သည်။ သမ္မတအဆင့်ရှိသူ၏ စည်းကို ထိပါးခဲ့သူတဦးအတွက် မိမိ၏ဩဇာ၊ပါဝါတို့ ကျဆင်းထိခိုက်ခံရခြင်း အဖြစ်အပျက်တို့ဖြစ်ပါသည်။
အင်အားထိန်းညှိမှုများတွင် လောလောလတ်လတ် သတိပြုနိုင်လောက်သော “စည်း”နှင့်“ငွေကြေး”ဆက်စပ်မှုတို ့၏ ပြယုတ်တခုသာဖြစ်ပါ၏၊
ခိုးမှု၊ လုယက်မှုတု့ိမှသည် မုဒိမ်းမှု၊လူသတ်မှုတို ့အထိ ကျူးလွန်သူအမှုရင်ဆိုင်နေရစဉ်အချိန်အတွင်း တရားရုံးမှ အာမခံငွေတခုထားကာ လွတ်လပ်စွာသွားလာနေထိုင်ခွင့်ပေးတတ်သည်။ အဆိုပါငွေကြေးပမာဏသည် ထောင်ဂဏ္ဍန်းမှ သိန်းသန်းအထိ ရှိနိုင်ပါသည်။ ငွေနှင့် ပြစ်မှုကို ချိန်ဆကြည့်နိုင်သော ပြချက်တခုဖြစ်သည်။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးပထမနိုင်ငံတို ့တွင် အာမခံလုပ်ငန်းများ၊ လူမှုဖူလုံရေးငွေစုဆောင်းငွေများ၊ ဘဏ်စာရင်းများ၊ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်များ စသဖြင့် နိုင်ငံသားတဦးချင်းစီကို တန်ဖိုးသတ်မှတ်ထားပါသည်၊ ဤသို့အားဖြင့် နိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံသားတို ့၏တန်ဖိုးလည်း များစွာကွာဟသွား၏။ ထိုထိုအကြောင်းတို့ကြောင့်ပင် ပထမနိုင်ငံသားတို့ပါဝင်လိုက်ပါကြသော နိုင်ငံတကာသွား လေယာဉ်၊သဘောင်္၊မီးရထားများသည် များစွာသတိထားဂရုစိုက်ခံရခြင်းဖြစ်လေ၏၊။ အာမခံကြေးကြီးစွားရှိသူတဦး ဆုံးပါး တိမ်းယွင်းခဲ့သော် လျှော်ရမည့်ငွေပမာဏမှာ မနည်းလှသောကြောင့်သာတည်း။
ငွေကို လူကလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ငွေက လူကို မလုပ်သွားစေရန်တော့ သတိချပ်သင့်သည်။
ငွေဖြင့်အရာရာကို ဆုးံဖြတ်သည်ဟု သဘောမထားကြပဲ ငွေကို အာဏာ၊ပါဝါ၊စည်းဘောင်၊ဒိုင်းကာတို ့အတွက် တိုင်းတာ ချိန်တွယ်စရာ စံနှုန်းတခုအနေဖြင့်သတ်မှတ်ကြည့်မြင်ကြစေလိုသည်။ အဆိုပါ စံပေတံဖြင့် လိုက်လံတိုင်းထွာ ဆုံးဖြတ်ပါမူ လူနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တို ့၏ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်နေမှုများ၊ လူလူချင်း ဆက်ဆံရေးများ များစွာပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်ကြစရာအကြောင်းရှိသည်။
ယခုနှစ်ပိုင်း (မြင့်တက်ပြောဆိုစရာဖြစ်လာနေသော) သူတပါး၏အလုပ်၊ ဘဝ၊ စည်းဘောင်များကို အင်တာနက်မျက်နှာဖုံးတပ်ကာ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်သုံးသပ်ဝေဖန်မှုများ၊ သူတပါးကို (မည်သူမှတောင်းဆိုခြင်းမရှိပါပဲ) ပညာပေးအစီအစဉ်ပြုလုပ်ဆုံးမသွန်သင်နေသူများ၊ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွင် ခုတ်ချ၊ဖြုတ်ထုတ်၊ရှင်းလင်း၊လှောင်ပြောင်၊ရှုံ့ချမှုများ စသည်တို ့တွင် ငွေကြေးပေတံသုံးကာ စံချကြည့်ကြစေလိုသည်။ နေရာယူခြင်း နေရာပေးခြင်း ရှေ့ထွက်ခြင်း၊ စင်ပေါ်တက်ခြင်း၊ တန်းစီခြင်း၊ အကျိုးအမြတ်ယူခြင်းတို ့တွင် စည်းဘောင်နှင့် စံထားဆုံဖြတ်ကြည့်ကြစေလိုပါသည်။ အဆိုပါအခြေအနေတို ့တွင် ငွေကို ဘယ်သူပေးသနည်း၊ ဘယ်ကပေးသနည်း၊ ဘယ်မျှတာဝန်ယူမှုရှိသနည်း၊ မူရင်းပိုင်သူမည်သူနည်း၊ ဆိုင်သူအဘယ်သူနည်း၊ မည်သူရသနည်း၊ မည်မျှရသနည်၊ မည်မျှ မျှဝေပေးနိုင်ကြသနည်း၊ မည်မျှထည့်ဝင်ပူးပေါင်းအားပေးကြသူရှိသနည်း၊ စသည် စသည်တို ့နှင့်ချိန်ဆကြည့်ကြစေလိုသည်။
ငွေကို စံထားလိုက်လျှင် လူမှုရေးကိစ္စများမြှောင်တို့မှာ လုံးဝဥဿုံမဟုတ်ကာမူ (များစွာ)ချောမွေ့ ပြေလည်လာနိုင်စရာရှိသည်ထင်ပါ၏။
ငွေကို လူကဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပြီး ငွေက လူကိုမောင်းနှင်မသွားနိုင်စေရန်တော့ သတိပြုပါ။
မြန်မာနိုင်ငံ က အဆိုတော် ဝိုင်ဝိုင်း ရဲ ့` စည်း ´ ဆိုတဲ့ ကော်ပီ သီချင်းလေး ကို
နားထောင်ဖူးချင် မှ နားထောင်ဖူးမှာပါ
ဝိုင်ဝိုင်း ရဲ ့အဆိုကျွမ်းကျင်မှုနဲ ့အိုင်စီ တို ့ရဲ ့လက်စွမ်းပြသမှုတို ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့ အခါကြတော့
နားထောင်လို ့ကောင်းတဲ့ အဆွေးသီချင်းလေး တစ်ပုဒ် ဖြစ်လာပါတယ် ။
နောက်တစ်ခုက ဘာပဲလုပ်လုပ် သူတပါးထိခိုက်နစ်နာမူမရှိအောင်တော့ စည်းစောင့်သင့်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ဆီးတော့မအောင့်သင့်ပါဘူး၊ဆီးအောင့်ထားရင်တော့ ရောဂါဖြစ်စေပါတယ်။ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး ကာရံညီအောင်ရေးကြည့်တာပါ။စိတ်မဆိုးရဘူးနော်…
ငွေက လူကိုမောင်း နှင်ခိုင်း တဲ့ ခေတ် တစ်ခေတ်ကို ရောက်နေနှင့်ပြီး ဖြစ်နေပါပြီ ၊
အဖြစ်ကတော့ မနှစ်ထက်ကထက် ပိုလို့ဆိုးနေပါပြီ ၊
The author want to measure everything with money.
It seems materialism.
But the good point is,
At least we may have something common to measure (aruler ).